आफ्नो हुनेवाला जीवनसाथीसँग यी ५ प्रश्न सोध्न नभुल्नुहोस् - Saptakoshionline
आफ्नो हुनेवाला जीवनसाथीसँग यी ५ प्रश्न सोध्न नभुल्नुहोस्
प्रकाशित मिति: शुक्रबार, बैशाख २७, २०७६ समय: ८:१४:१६
बिवाहपछि श्रीमान श्रीमतीबीच अक्सर पैसाको विषयमा मनमुटाव रहन्छ । पैसालाई हेर्ने दृष्टिकोण दुबैको आ–आफ्नो हुनसक्छ ।
तपाईं कस्तो वातावरणमा हुर्किनु भयो र कस्तो शिक्षा–दिक्षा पाउनु भयो भन्ने कुराले पनि तपाईको भविष्य निर्धारण गर्छ । यही कारण पछि गएर सम्बन्धमा असमझदारी, तनाव, झगडा हुने गर्दछ । यसको मूख्य कारण भनेको अक्सर पैसा हुने गर्दछ ।
यस्तोमा बिवाह अगाडि नै फाइनान्सियल विषयमा खुलेर कुराकानी गर्नु राम्रो हुन्छ । प्रेम विवाह होस् वा मागी विवाह यी दुबैमा यो गर्नु आवश्यक छ । यदि तपाई हुनेवाला जीवनसाथीलाई राम्ररी जान्नु हुन्न वा लामो समयदेखि जान्नु हुन्न भने पैसासँग सम्बन्धित प्रश्न सोध्न असहज हुनसक्छ । तर कुरा तपाईको भविष्यसँग जोडिएको हुन्छ । पैसाको विषयमा सानो मुनमुटावले तपाईको सम्बन्धमा ठूलो पर्खाड खडा गर्न सक्छ । यसकारण पैसासँग सम्बन्धित यी पाँच प्रश्न विवाह अगाडि नै आफ्नो हुनेवाला जीवनसाथीसाथीसँग सोध्नुहोस् :
प्रश्न १. तपाईको अभिभावकले पैसाको मामलामा बचपनमा कति छुट दिनुभयो ?
आफ्नो हुनेवाला जीवनसाथीसँग उसको घरपरिवारले पैसाको विषयमा कस्तो दृष्टिकोण राख्छन् र बचतलाई कति महत्व दिन्छन् जान्ने कोशिस गर्नुहोस् । ठूलो आम्दानी र खर्चलाई कसरी व्यवस्थापन गर्छन् ?, पैसाको विषयमा उसको परिवारले कुनै ठूलो गल्ती गरेका छन् कि ?, घरको जेष्ठ सदस्यलाई आर्थिक रुपबाट कसरी हेर्छन् ? यो सबै प्रश्नहरुको उत्तर खोज्नुहोस् ताकि तपाईहरु एक–अर्कोले आर्थिक पृष्ठभूमिको बारेमा बुझ्ने मौका मिलोस् ।
प्रश्न २. कर्जा र इच्छाएको व्यवसायमा भविष्य कसरी बनाउने ?
पैसासँग सम्बन्धित धेरै जिम्मेवारी हामी सबैलाई उत्तिकै महत्वपूर्ण हुन्छ । यदि तपाईको परिवारले तपाईलाई पढाउन कर्जा लिनुभएको छ भने त्यो तिर्नु नै पर्दछ । हुनसक्छ अभिभावकले आफ्नो रिटायर्डमेन्टको पैसा खर्च गर्नुभएको छ । यसको अलवा भविष्यमा तपाई जागिर छोडेर कुनै आफूलैी इच्छाएको काम वा पेशा अपनाउन चाहानुहुन्छ भने यस बारेमा पनि विवाह अगाडि नै चर्चा गर्नु अति आवश्यक छ ।
प्रश्न ३. खर्च गर्ने समयमा कति पैसा बाँकी छ भने जाँच गर्नुहुन्छ ?
पैसा खर्च गर्ने बानी श्रीमान–श्रीमतीबीचको झगडाको विउ बन्छ । यसकारण खर्च गर्ने समयमा कति आफूसँग पैसा बाँकी छ वा क्रेडिट कार्डबाट खर्च गर्ने बेलामा कार्ड चेक गर्ने बानी छ कि छैन थाहा पाउनुहोस् । क्रेटिड कार्डबाट मनलाग्दी खर्च गर्दा बैंकमा उधारो वा कर्जा तिर्नुपर्छ । तपाई बचत मात्रै गर्नुहुन्छ वा कतै लगानी पनि गर्नुभएको छ यस विषयमा विवाहभन्दा पहिले नै एक–अर्काको बारेमा जान्ने कोशिस गर्नुहोस् ।
प्रश्न ४. पैसासँग सम्बन्धित भविष्यको योजना के छ ?
घर किन्ने, बच्चा प्लानिङ्, रिटायर्डमेन्ट र आकस्मिक अवस्थाको बारेमा खुलेर कुरा गर्नुहोस् । बिवाहपछि पढ्ने इच्छा छ भने त्यसको विषयमा पनि कुरा गर्नुहोस् । गाडी किन्ने वा सन्तानको शिक्षा–दिक्षाको लागि पैसा बचत गर्नु कनुचाहिँ उसको प्राथमिकतामा पर्छ त्यो पनि जान्ने कोशिस गर्नुहोस् । लगानीको योजनाको बारेमा पनि सोध्न नभुल्नुहोस् ।
प्रश्न ५. बिवाह र हनीमुनको लागि कति खर्च गर्नुहुन्छ ?
आफ्नो हुनेवाला जीवनसाथीलाई तपाई बिवाहमा गरिने खर्चको बारेमा के सोच्नुहुन्छ बताउनुहोस् । यदी आफ्नो बचतको ठूलो रकम यसमा खर्च गर्नुहुन्छ भने यो कुरा भने भन्नुहोस् । बिवाहमा हुने खर्च वा अन्य बिषयमा खुलेर कुरा गर्नुहोस् । यसले बिवाहमा वा बिवाहपछि आउने समस्या समाधान गर्न सहयोग पुग्छ । पैसासँग सम्बन्धित आफ्नो इच्छा आकांक्षा र भविष्यको सपनाको बिषयमा आफ्नो हुनेवाला जीवनसाथीसँग बिवाह अगाडि नै खुलेर कुरा गर्नुहोस् ।
के हो तान्त्रिक यौन ?
तान्त्रिक यौन, अलि भिन्न लाग्न सक्छ यो सन्दर्भ । वास्तमा यो यौनको कुनै अनौठो गतिविधि भने होइन । यसको लक्ष्य के मात्र हो ...
ह्ट अवतारमा स्विमिङ पूलमा सुष्मा
नायिका सुष्मा कार्कीको व्यस्तता हिजोआज चलचित्रमा कम देखिन्छ । सुष्मा चलचित्रमा कम, विदेश कार्यक्रममा बढी व्यस्त छिन् । च...
यसकारण विवाह पश्चात मोटोउछन् युवतीहरु….
विवाह हुनुभन्दा पहिला हरेक युवती स्लिम रहन हरेक प्रकारका प्रयासहरु गर्छन् । उनीहरु नमोटाउनकै लागि खाने कुरामा धेरै ध्यान...
किन खानुहुँदैन साउनमा माछा मासु ? यस्तो छ वैज्ञानिक कारण ।
साउन महिना, धार्मिक आस्था राख्नेहरुका लागि विशेष महिना । यो महिनामा केही धार्मिक पर्वहरु पनि पर्छ । यो साउने संक्रान्तिक...
चेतावनी : पत्रपत्रिकामा राखेका खानेकुरा कहिल्लै नखानुहोस्, मसीमा हुन्छ यस्तो डरलाग्दो रसायन ?
पत्रपत्रिका वा कागजमा मिठाईहरु राखेर खाने अहिले धेरैको बानी हुन्छ । के गाउँ के सहर प्रायः ठाउँमा पसलेहरू चटपटे, समोसा, प...
साढे १५ करोड रुपैयाँ पर्ने परेवा
एउटा परेवाको मूल्य १५ करोड रुपैयाँ पर्छ भन्दा तपाईंलाई पत्यार नलाग्न सक्छ तर, वास्तविकता यस्तै छ । हाम्रो टोलछिमेकमा साम...